अन्तत: फ्रान्स विश्वकपको फाइनलमा, बेल्जियम १–० ले पराजित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अन्तत: फ्रान्स विश्वकपको फाइनलमा, बेल्जियम १–० ले पराजित
काठमाडौं । फ्रान्स विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
फ्रान्सले बलियो टोली बेल्जियमलाई १–० ले पराजित गरेको हो । यससँगै बेल्जियमको विश्वकप सपना सेमिफाइनलबाटै तुहिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा खेलको ५१ औं मिनेटमा फ्रान्सका डिफेन्डर स्यामुल उमटीटीले हेडरमार्फत हानेको एकमात्र गोल जितकालागि निर्णायक बन्नपुग्यो ।
उनले स्टार एन्टोनी ग्रीजम्यानको कर्णर किकमा गोल गरेका थिए । अब फ्रान्सले विश्वकप उपाधिका लागि इंगल्याण्ड र क्रोएसियाबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । बेल्जियमले भने इंगल्याण्ड र क्रोएसियाबीचको उपविजेतासँग तेस्रो स्थानका लागि भिड्नेछ ।